जनयुद्ध दिवसमा दाङमा हुने कार्यक्रमको अध्यक्षता कस्ले ग्रहण गर्ला ? « Farakkon
जनयुद्ध दिवसमा दाङमा हुने कार्यक्रमको अध्यक्षता कस्ले ग्रहण गर्ला ?
दाङ,माघ २९ । नेपालको परिवर्तनमा जनयुद्धको भूमिका विषयक अन्तक्रिया कार्यक्रम हुने भएको छ । तत्कालिन नेकपका माओवादीले २०५२ साल फागुन १ गते सशस्त्र युद्ध सुरु गरेको दिनलाई जनयुद्ध दिवसको रुपमा मनाउँदै आएको छ । उक्त दिवसको अवसरमा बुधवार घोराही उपमहानगरपालिकाको सभाहलमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गरिएको छ । पूर्व एकिकृत नेकपा माओवादी र पूर्व नेकपा एमालेको एकता पछि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी निर्माण भएपछि पहिलो पटक जनयुद्ध दिवस मनाउँदा जिल्लामा त्यसको अध्यक्षता कस्ले ग्रहण गर्ने हो ? भन्ने सवाल भने पेचिलो बनेको छ ।
विश्वसनिय स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार बुधवार घोराहीमा हुन भनिएको उक्त कार्यक्रकमको प्रमुख अतिथि नेकपा ५ नं. प्रदेशका सचिव जगप्रशाद शर्मा (अपार) रहने छन् । तर,कार्यक्रमको अध्यक्षता कस्ले गर्ने ? भन्ने वारेमा भने अझैं टुङ्गो लागि नसकेको स्रोतले फरककोणलाई बताएको छ ।
‘अध्यक्षता कस्ले ग्रहण गर्ने भन्ने कुरा निश्चित छैन,’ एकजना नेताले भने ‘त्यो बिषय अझैं अन्यौंल छ।’ सभाहलमा बुधवार विहान ११ बजेपछि हुने अन्तरक्रियाको अध्यक्षता जिल्ला पार्टीको कार्यदल मध्यका एकजनाले गर्ने संभावना छ । त्यो कार्यदलमा टिकाराम खड्का,तुलसीराम पुन, शिवकुमार आचार्य र रामजी चौधरी मध्य कस्ले गर्ने भन्ने अझैं टुङ्गो लागि सकेको छैन । माथिका चार जना नेता मध्य एकजनाले स्वागत, एकजनाले कार्यक्रम संचालन र एकजनाले अध्यक्षता ग्रहण गर्न सक्ने संभावना रहेपनि अध्यक्षता कस्ले ग्रहण गर्ने भन्ने विषय अन्यौंल रहेको स्रोत बताएको छ ।
यो समस्या आउनुको प्रमुख कारण भने जिल्लामा नेकपाको अध्यक्ष को हो ? भन्ने टुङ्गो नलाग्नुकै परिनाम भएको ती नेताले अथ्र्याए । अध्यक्षका लागि दाङ बाट मुख्य मन्त्री तथा प्रदेश नं. ५ का नेकपा अध्यक्ष शंकर पोखरेलका बहिनी ज्वाँई शिवकुमार आचार्यको नाम सिफारिस गरिएपछि त्यसले निकै विवाद उत्पन्न भएको थियो । पार्टी भित्र बरिष्ठ नेता माधवकुरमा नेपाल पक्षधरले आफुहरुलाई पेलेर जान लागेको भन्दै व्यापक विरोध गरेपछि फेरि जिल्ला बाट त्यसअघि सिफारिस नभएपनि पूर्व नेकपा एमालेका जिल्ला अध्यक्ष टिकाराम खड्काको पनि नाम सिफारिस गरेर पठाइएको छ ।
जिल्लामा नेकपाले १० वटै स्थानीय तहको नेतृत्व टुङ्गो लगाएको भएपनि अझैं जिल्ला अध्यक्ष को हुने भन्ने टुङ्गो भने लगाउन सकेको छैन । त्यही भएर बुधवार जनयुद्ध दिवस मनाउने तयारी भइरहँदा त्यसको अध्यक्षता कस्ले गर्ने भन्ने अन्यौंलता कायमै रहेको स्रोतले बताएको छ ।